Pennsylvania Homegrower Application - fomba hahazoana Fahazoan-dàlana
Pennsylvania fampiharana ny mpamboly trano
Pennsylvania Homegrown Licence Cannabis
Mandra-pahatongan'izany ary raha tsy hoe miaina eo ambanin'ny vatolampy ianao dia tsy maintsy efa henonao fa ny Senatera State Pennsylvania - Sharif Street sy Daylin Leach - dia namoaka volavolan-dalàna vao haingana, raha ekena, dia hanara-dalàna ny fampiasana marijuana ao amin'ny fanjakana. Raha ekena, Ny lapan'ny Senatera 350 dia hanao Pennsylvania ny fanjakana faha-12 any Etazonia manara-dalàna ara-dalàna ny fampiasana rongony.
Ny volavolan-dalàna napetraky ny senatera dia mametraka ny taona ara-dalàna ho an'ny fampiasana rongony amin'ny 21 taona. Ambonin'izany, raha ankatoavina, dia hitarika ho amin'ny fampandehanana ho azy ireo fehezanteny mifandraika amin'ny rongony rehetra. Ankoatry ny fanarahan-dalàna ny fandefasana trano any an-trano, ny volavolan-dalàna ihany koa dia mikendry ny hanara-dalàna ny fambolena ny zavamaniry ho an'ny fampiasana manokana ary ny fampiasana ny trondro aretim-bary amin'ny toerana manokana sy omena alalana ho an'ny daholobe, toy ny louyes. Ny volavolan-dalàna dia mamaritra ny ara-dalàna manodidina ny fizotran'ny fampiharana sy ny famerana ara-dalàna ho an'ireo sokajy mpangataka samihafa, izany hoe, mpamboly, microgrowers, ary tompon-trano.
Ny fahazoana ireo hevi-dehibe momba ny mpamboly, Microgrowers, ary ny homegrowers
Ny volavolan-dalàna natolotra dia manome fanavahana mazava ny foto-kevitry ny mpamboly, microgrowers, ary tompon-trano.
Raha ny volavolan-dalàna natolotra, ny olona izay manana ny haben'ny vokatra dia mihoatra ny 1,50,000 metatra toradroa any ivelany na 60,000 metatra toradroa ao anatiny dia hianjera eo ambanin'ny sokajy Gmpivoy. Ny olona navelan'ny departemanta dia nanondraka tsizarizary amin'ny fametrahana tanjona na hamidy amina fotoam-bidy dia hianjera araka ny sokajy misy azy. 'Microgrowers.' Farany, manazava ny volavolan-dalàna 'Homegrowers' toy ny olona navelan'ny departemanta dia nampitombo rongony ho an'ny fampiasana manokana.
Zava-dehibe ny mahatakatra ny fahasamihafana amin'ireo sokajy telo ireo satria ny fameperana ara-dalàna sy ny famerana arakaraka ny sokajy rehetra dia miovaova be. Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny fomban-draharaha manodidina ny Ny fizotran'ny fangatahana homegrower any Pennsylvania, araka ny natolotry ny volavolan-dalàna vaovao, ary koa ny fameperana napetraky ny volavolan-dalàna tompon-trano.
Senate Bill 350, izay mikendry ny hanara-dalàna ny fampiasana rongony any Pennsylvania, dia mamaritra ny antsipirihany momba ny fahazoan-dàlana hisian'ny fahazoan-dàlana ho an'ireo mponina vonona ny ho voasokajy tompon-trano. Nilaza ilay volavolan-dalàna fa raha ny fandefasana fangatahana iray no dinihina dia tsy maintsy vonona ny olona hanome ny famoahana ilaina ilaina amin'ny fahazoana fampahalalana ilaina avy amin'ny mpampiasa, ny masoivoho governemanta ary ireo fikambanana hafa. Ankoatr'izay, amin'ny fangatahan'izy ireo dia tsy maintsy manambara ihany koa ny fampahalalana momba ny fahazoan-dàlana mitovitovy amin'ny fahazoan-dàlana mitovitovy amin'ny fahazoan-dàlana hafa. Amin'ny fangatahan'izy ireo dia tsy maintsy manamarina an-tsoratra ny fahafahan'izy ireo hanaraka ny fitsipika rehetra ny volavolan-dalàna napetraky ny volavolan-dalàna momba ny hetsika mifandraika amin'ny rongony eto an-tanàna. Ny lalàna natolotra dia manolotra fametrahana ilay fampiharana amin'ny fanambaràna diso izay tokony hanasaziana azy. Ny mpangataka dia tsy maintsy mandefa ny taratasy fangatahana amin'ny departemanta miaraka amin'ny fangatahana fangatahana $ 50. Ny volavolan-dalàna dia manome alàlana ny fanavaozana fahazoan-dàlana isan-taona amin'ny sarany 50 $.
Pennsylvania Homegrower Application - fameperana, fetra ary ny ara-dalàna
Ny volavolan-dalàna natolotra dia mametraka fetra lehibe sasany tompon-trano. Ohatra, ny volavolan-dalàna dia manondro izany mandritra izany tompon-trano avela hanatodizna matetitetika an-trano ho fampiasa manokana, izy ireo tsy mahazo manao zavamaniry mihoatra ny folo amin'ny fotoana rehetra. Ny volavolan-dalàna ihany koa dia manala izany tompon-trano avela hampiasa ny voan-trondro ao an-tokantranony any an-toerana tsy miankina ary koa ny efitra fandroana mamela ny fampiasana rongony. Azon'izy ireo atao ihany koa ny mizara ny vokatra vita an-trano amin'ny olona hafa ao amin'ny fiaraha-monina, raha toa ka ny mpampiasa rehetra dia manaraka ny fameperana hampiharina amin'ny fampiasana rongony amin'ny alàlan'ny volavolan-dalàna. Na izany aza, tompon-trano tsy havela hivarotra na manakalo vola amin'ny otrikaina efa lehibe an-trano. Na izany aza, nilaza mazava ny volavolan-dalàna fa nolavina ny fangatahana ataon'ny mpangataka efa manana fahazoan-dàlana. Amin'ny teny tsotra kokoa, ny olona iray dia tsy mahazo mitana fahazoan-dàlana mihoatra ny iray ambanin'ity lalàna ity.
Ny Teny farany
Ireo senatera izay nanolotra ny volavolan-dalàna dia mahita izany ho vahaolana amin'ny olana ara-toekarena, ara-moraly, ary politika manodidina ny fampiasana rongony ao amin'ny fanjakana. Mino izy ireo, raha lany ilay volavolan-dalàna dia mety hampihena ny filana ny famarotana voa amidy ny varotra ary ho fipoahana goavana amin'ny tsenan'ny mainty. Ny volavolan-dalàna Senat 350 dia hatolotra ny komity làlàn'ny senate avy amin'ny Filoha Pro Tempore ao amin'ny senate. Ny komity no handray ny fanapahan-kevitra farany momba ny lalàna atolotra.
Ireo mpisolovava amin'ny rongony dia manana businetel ihany koa: 3097404033ss tompona. Izy ireo dia afaka manampy anao amin'ny famolavolana ny orinasanao na manampy amin'ny fiarovana azy amin'ny lalàna mavesatra loatra.